यस्तो समुदाय जहाँ महिलाले गर्छन् पुरुषको बलात्कार! - Malayakhabar
होम पेज फिचर यस्तो समुदाय जहाँ महिलाले गर्छन् पुरुषको बलात्कार!
यस्तो समुदाय जहाँ महिलाले गर्छन् पुरुषको बलात्कार!
एजेन्सी := सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ । नेपाल, भारत लगायतका देशमा पुरुषले बलात्कार गरेर अत्याचार गरेका खबरहरु दिनहुँ जसो सार्वजनिक भैरहन्छन् तर यूरोपको एक देशमा भने महिला नै बलात्कारमा अगाडी छन् । पपुवा न्युगिनीमा एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँ पुरुषले महिलाको यौन प्रस्ताव अस्वीकार गरे कडा कारवाही हुन्छ । पपुवा न्युगिनीको बसा गाउँका महिलाहरु पुरुषलाई सित्तैमा यौन सम्पर्कका लागि प्रस्ताव गर्छन्।
त्यहाँको सरकारले दुरदराजका गाउँका महिलालाई यौन चेतना र अधिकार दिन यस्तो अनौठो अधिकार दिएको छ की त्यहाँका जोसुकै महिलालाई यौनप्रस्ताव राख्न खुल्ला गरिदिएको छ । यदि महिलाले गरेको यौनप्रस्ताव अस्वीकार गरे ती महिलाले पुरुषको मुखमा पिसाब फेरेर कडा सजाय दिनेछिन् । यसो गर्दा महिलालाई सरकारले कुनै कारवाही गर्दैन । यो अधिकार विशेषगरी पपुवा न्युगिनीको ट्रोबियाण्ड जातिका महिलालाई दिइएको हो।
यो अधिकारको सहयोगमा यो जातका महिलाले कैयौ पुरुषसँग यौनसम्पर्क राख्न पाउनेछन् । यो जातका महिलासँग बाहिरका पुरुष यौनसम्पर्क राख्न चाँहदैनन् । दुनियाँ पनि अचम्म अचम्मको छ । नेपाल, भारत लगायतका देशमा पुरुषले बलात्कार गरेर अत्याचार गरेका खबरहरु दिनहुँ जसो सार्वजनिक भैरहन्छन् तर यूरोपको एक देशमा भने महिला नै बलात्कारमा अगाडी छन् ।पपुवा न्युगिनीमा एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँ पुरुषले महिलाको यौनप्रस्ताव अस्वीकार गरे कडा कारवाही हुन्छ।
पपुवा न्युगिनीको बसा गाउँका महिलाहरु पुरुषलाई सित्तैमा यौनसम्पर्कका लागि प्रस्ताव गर्छन् ।त्यहाँको सरकारले दुरदराजका गाउँका महिलालाई यौन चेतना र अधिकार दिन यस्तो अनौठो अधिकार दिएको छ की त्यहाँका जोसुकै महिलालाई यौनप्रस्ताव राख्न खुल्ला गरिदिएको छ ।यदि महिलाले गरेको यौनप्रस्ताव अस्वीकार गरे ती महिलाले पुरुषको मुखमा पिसाब फेरेर कडा सजाय दिनेछिन् । यसो गर्दा महिलालाई सरकारले कुनै कारवाही गर्दैन।
यो अधिकार विशेषगरी पपुवा न्युगिनीको ट्रोबियाण्ड जातिका महिलालाई दिइएको हो । यो अधिकारको सहयोगमा यो जातका महिलाले कैयौ पुरुषसँग यौनसम्पर्क राख्न पाउनेछन् । यो जातका महिलासँग बाहिरका पुरुष यौनसम्पर्क राख्न चाँहदैनन्।
अघिल्लो लेख महामारीले रेमिट्यान्सलाई डिजिटलमा परिवर्तन गर्न मद्दत गर्‍यो र अब भविष्य डिजिटलको हो :कमल।
पछिल्लो लेख महिलाले स्तनलाई टाइट र आकर्षक बनाउने यस्ता छन् रोचक तरिका।
काठमाडौं:= विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार आदर्श सम्बन्धका लागि श्रीमान् र श्रीमतीबीचको उमेर फरक सामान्यत तीन–चार वर्षको मात्र हुनुपर्छ । श्रीमान श्रीमतिको उमेर १० वर्षभन्दा बढी...